China Polyquaternium-11 umzi-mveliso kunye nabavelisi | Y&R
Intlanzi Collagen Peptide
Uhlobo lwe-Hydrolyzed II Collagen
I-Tetra-Naliti Njenge-Zinc Oxide Whisker
Tshaza Ukomisa iLactose
IBanga le-USP ye-Anhydrous yeLanolin
IPoly(Methylvinylether/Maleic Acid)Iityuwa ezixutyiweyo
Ipoly(MethylvinyletherMaleic Acid) Isiqingatha seEsters Copolymer
IiPolima zePVP 1
I-Polyquaternium-11 yi-quaternized copolymer ye-vinylpyrrolidone kunye ne-dimethyl aminoethylmethacrylate,
isebenza njenge-ejenti yokulungisa, yokwenza ifilimu kunye nemeko. Inika ukuthambisa okugqwesileyo kwiinwele ezimanzi kunye nokulula kokukama kunye nokuphazamiseka kwizinwele ezomileyo. Yenza iifilimu ezicacileyo, ezingezizo, eziqhubekayo kwaye zinceda ukwakha umzimba kwizinwele ngelixa zishiya zilawuleka. Iphucula ukuvakalelwa kwesikhumba, ibonelela ngokugudiswa ngexesha lokusetyenziswa kunye nokulungiswa kwesikhumba. I-Polyquaternium-11 icetyiswa ukuba isetyenziswe kwiimousses, iigels, izitshizi zesitayile, izitayile ezintsha, i-level-in conditioning lotions, ukhathalelo lomzimba, izithambiso zombala, kunye nezicelo zokhathalelo lobuso.
Igama lemveliso: Polyquaternium-11
Ikhowudi yeMveliso: YNR-PQ11
INCI Igama: Polyquaternium-11
Inombolo yeCAS: 53633-54-8
Ifomula yemolekyuli: I-C18H34N2O7S
Polyquaternium-11yityuwa ye-polymeric ye-quaternary ammonium eyenziwe ngokusabela kwe-diethyl sulfate kunye ne-copolymer ye-vinyl pyrrolidone kunye ne-dimethyl aminoethylmethacrylate. Ikwiklasi yekhemikhali eyaziwa ngokuba yi-quaternary ammonium compounds (ebizwa ngokuba yi "Quat").I-Polyquaternium-11 sisisombululo esiphezulu se-aqueous viscous,I-Miscible ngamanzi kunye ne-ethanol,Ivumba elincinci lophawu.I-Polyquaternium-11 lilifu, i-straw. -ifilimu enemibala yangaphambili kunye ne-anti-static agent.Isebenza njenge-ejenti yokumisela kunye nefilimu-yangaphambili, i-styling encedisayo.
Iiparamitha ezingundoqo zobuGcisa:
Imbonakalo Ulwelo olululwelo olubonakalayo olucacileyo ukuya kutsho kancinane
Umxholo oqinileyo 19-21%
Ixabiso le-pH (njengoko linjalo) 5.0~7.0
N-Vinylpyrrolidone 0.1% ubukhulu.
Umbala(APHA) 120 max.
Usetyenziso:I-Polyquaternium-11 ibonelela ngokukhanya, ukudityaniswa kunye nokunciphisa izibonelelo kwii-conditioner zeenwele kunye ne-shampoos ngokugquma iinwele kwifilimu ecacileyo eyongeza umthamo obonakalayo kunye noluvo.
I-Polyquaternium-11 yi-quaternary ammonium compound eyenza iifilimu eziguquguqukayo kunye neenzuzo zokunciphisa i-mild conditioning kwi-rinse off kunye ne-styling applications.Sebenzisa njenge-agent ye-conditioning kwi-shampoos kunye ne-cream okanye i-rinse conditioners ecacileyo. Ibonelela ngokuphazamiseka ngoko nangoko ngelixa isongeza umthamo kunye nomzimba kwizinwele. Yenza iinwele zibe lula ukudibanisa.Ingakumbi iphumelele kwiimveliso zeenwele, kubandakanywa ne-spray kwi-conditioners kunye ne-detanglers. Igqwesileyo isetyenziselwa ukomisa ukubetha kunye ne-straighteners apho inokubonelela ngokhuseleko lwe-thermal lweenwele. I-Polyquaternium-11 isebenza kakuhle kwiimveliso zokucheba, izithambiso zolusu kunye nezinto zokuthambisa, isepha engamanzi kunye nemivalo yesepha.
I-Polyquaternium-11 isetyenziselwa ukunakekelwa kweenwele ezifana ne-mousses, ijeli, izitshizi zempompo kunye ne-spritzes. Isebenza njenge-arhente yokumisela imeko kunye nefilimu-yangaphambili. Ibonelela ngeempawu ezinje ngokuqina, ukubengezela kunye nokulawula.Isetyenziswa kukhathalelo lweenwele ezifana nezithambiso, iimowusi, iijeli, izitshizi, iishampu, kukhathalelo lwesikhumba njengesepha, ugwebu lokucheba kunye neloji yomzimba. Isebenza njenge-conditioner kunye nesitayile esincedisayo. I-Polyquaternium-11 izithuba ezisasazekayo, ukutshaja kwe-electrostatic ukuthintela kunye neempawu zokuthambisa. Ibonelela ngezibonelelo ezibandakanya i-lather ezinzileyo, ukuqina, ukuhlangana okumanzi, ukuthamba, ukubamba, ukuva okugudileyo kunye nokuziva kolusu olusilika.
I-Polyquarternium-11 xa isetyenziswe kwimveliso enogwebu efana neshampu okanye ijeli yeshawa iyakwandisa amanqanaba amagwebu. I-Polyquaternium-11 iyahambelana ne-non-ionic, i-anionic kunye ne-amphoteric surfactants kunye ne-rheology modifiers. I-Polyquaternium-11 igqwesileyo idibene ne-carbomer ukuvelisa i-gels egudileyo kwaye kulula ukuyisebenzisa.
I-Polyquaternium-11 inikezelwa njengolwelo lwe-viscous, nangona inikezelwa ngejagi ukuze isetyenziswe lula njengoko ulwelo lukhuni kakhulu. Ukufudumala ngokufudumala kunokunceda ngokusebenziseka kwi-formulation.I-Polyquarternium-11 ichithwa ngokukhawuleza emanzini kwaye ngoko ke kulula ukunyibilika kwinqanaba lamanzi lokuqulunqa. Xa isetyenziswe kwi-surfactant based formulation sicebisa ukongeza i-Polyquaternium-11 phambi kwee-surfactants ukuze kube lula ukusabalalisa. I-Polyquatenrium-11 iyakwazi ukumelana nobushushu.
Okulandelayo: I-Hydrolyzed Keratin
China Polyquaternium 11 umzi-mveliso